ileghara anya? Izu mbụ m kwagara na MacBook Pro | Martech Zone
Ka ọ dị ugbu a, ị banyelarị na mgbasa ozi Mac vs. PC:
Eziokwu bụ na m ji n'aka na ha ntu ihe ọ bụ na Mac ọrụ na-enwe. O doro anya na ndị niile iLife, iMovies, iTunes, wdg bụ oké iji. Ọzọkwa, ọ bụghị ihe ijuanya na ndị okike nwere mmasị iji Mac. Offọdụ n'ime ya nwere ike ịbụ na ndị folks dị ka Adobe na mmemme dị ka Quark bidoro na Mac.
Mmewere nke m kwenyere na Apple na-efu na mkpọsa ngwa ahịa ndị a bụ nghọta nke njirimara onye ọrụ. Ọ bụ ezie na Windows ghọrọ usoro na n'ezie iickedomi ọtụtụ nke Apple àgwà, ha ka nwere ike n'ezie weghara ala nke iji.
Aga m egosi afọ m ebe a, mana amalitere m na ụlọ ọrụ a site na mgbagha mmemme nke Programmable Logic Controllers (PLCs), kwagara DOS, PLCs jikọtara DOS, ma mepụta, mejuputa ma tinye ngwa na Microsoft Windows, IBM OS2 Warp / Warp Server, wdg. Ọ dịtụbeghị mfe, mana m na-agbagha onwe m mgbe niile n'ịgụ ma na-anwale imezi na iwekọta ọtụtụ. Enwere m ọtụtụ ahụmịhe, ị nwere ike ịsị na m bụ 'Microsoft Guy', ebe m ji ya dị ka isi ihe m na ọrụ m.
OSX (Sistemụ arụmọrụ nke Mac), adịchaghị mgbagwoju anya, dị mfe iji, dị mfe iji duzie, hazie, iwekọta, wdg. mmemme. Amaghị m na m nwere ike ịdọrọ ya na folda Ngwa m. You chọghị na ọ dị mfe na Windows? Sheesh.
Banyere mmekọrịta anyị na ọrụ (anyị bụ ụlọ ahịa Microsoft), enweghị m nsogbu. Enweghị nsogbu ịbanye na netwọk, ịnweta ikuku, iji Office na izipu na ịkekọrịta faịlụ. O nwebeghị mgbu. Enwere m Ndekota na-agba ọsọ 'ọ bụrụ na' Achọrọ m ịgba ọsọ XP… mana m na-agbapụ ya na windo na Mac (ọ dị egwu). N’ebe ahụ enwere m Microsoft Access na Microsoft Visio.
Ya mere… okwu mbu m kwesiri ibu iElegance. Apple na-arụ ọrụ dị egwu na ntanetị mara mma, dị mfe nke na-agba ọsọ zuru oke. Mgbe m gbanwere PC na PC n'oge gara aga, a na-ewepụta ya n'eziokwu karịa oge ọ ga-agbanwe na Mac. Ọ masịrị m.
Ọkt 30, 2006 na 5:42 AM
Nabata na ụwa magburu onwe ya nke Mac 🙂
Enweela m mbụ ngosi Mac na mmalite 80s, mgbe m hụrụ ngosi nke mesiri eziokwu ahụ ike na Macs nwere mmekọrịta enyi na enyi (dịka "Biko tinye diski ahụ" ma ọ bụghị "fanye diski"). Mgbe m nọrọ otu afọ na US na 1986, shool nwere naanị Macs. Ha dị mfe na ntanetị, na ihe amara iji mee ndịna eserese (taa, mmadụ ga-akpọ "ndịna eserese"). Ruo afọ ụfọdụ, mụ na PC rụkọrọ ọrụ, ọkachasị maka na dịka nwata akwụkwọ, enweghị ike ị nweta Mac n'oge ahụ. Ọzọkwa enwere m Mac mara mma (5200), nke bụ onye bu ụzọ ụzọ, agbanyeghị na-enweghị nkpa, nke iMac. Ọzọkwa, mgbe Windows XP pụtara, a nwara m ịzụta Sony Laptop. Ọbụghị naanị na teknụzụ na-akwado ara, n'oge ahụ amalitere m ịkpata ego na vidiyo, yana ịnweghachi batrị PC gị kwa awa yana onye ahịa nọ n'akụkụ gị, abụghị ezigbo ahụmịhe. Ya mere anyi wuru na Final Cut bandwaggon, nke nwere ugbua 1.25. Anaghị akwa ụta ya otu oge. Taa, anyị bụ 2 n'ọfịs, ma nwee 5 Macs; ihe niile sitere na obere Mac mini, ụlọ ochie G4 (ị nwere ike iche na PC dị afọ 7 nke ka dị mma, ma ka na-arụ ọrụ?) Ruo G5 na ndị nhazi 4.
N'okpuru ala: Macs nwere ike ị na-eri ihe karịa na nke mbụ, mana ha na-echekwa ọtụtụ ihe na nrụpụta nrụpụta, na-atọ ụtọ isoro ha rụọ ọrụ, na-echekwa nje Ha na aru oru.